Ukutyelela iSweden kwiminyaka emitsha: iStockholm, iGothenburg, iUmea okanye iUppsala?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSweden eziQhekezayo » Ukutyelela iSweden kwiminyaka emitsha: iStockholm, iGothenburg, iUmea okanye iUppsala?
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zaseSweden eziQhekezayo • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukuhambela iSweden yoNyaka oMtsha kuthetha into enye: iziqhushumbisi. Imisebenzi yomlilo ithetha ishishini elikhulu kukhenketho. Nazi iingcebiso zeNgingqi zeNewspapre zokuba ubabukele kwilizwe liphela, ukusuka eStockholm naseGothenburg ukuya eUmea, Uppsala nakwezinye iindawo
Ubuninzi beentaba kunye neziqithi zeStockholm zithetha ukuba kukho iindawo ezimbalwa ezifanelekileyo ukubukela izinto zenzeka embindini wesixeko. KwiSödermalm, amawa anyuka eSlussen ayindawo elungileyo, ngelixa usinga ngasentshona ecaleni kweHornsgatan iinduli ezisemva kweSöder Mälarstrand - ngakumbi iSkinnarviksberget- inika umbono omkhulu weKungsholmen kubandakanya iHolo yeSixeko.
Okanye, kutheni ungenzi ngokuchaseneyo kwaye uwelele emanzini uNorr Mälarstrand kwaye ubukele iziqhushumbisi zihamba zisiya esibhakabhakeni ngaphezulu kweSödermalm? Okona kulungileyo kwihlabathi liphela kunokufumaneka kwibhulorho phakathi kwezi ziqithi zimbini, iVästerbron, kodwa lindela ukuba uxakeke kwaye uzame ukufika kwangoko ukuze uqinisekise indawo elungileyo.
Kwindawo esempuma yesixeko, iStrandvägen e-ermstermalm ikwayindawo efanelekileyo yokujonga iziqhushumbisi zidityaniswe namanzi, kwaye ubuninzi bemivalo ekufuphi kuthetha ukuba zininzi iindawo zokudibana ngaphambili kwaye zifudumele.
Ngamava asezidolophini kancinci, iSkansen ivuliwe emva kwexesha nge-31st ukuze abavukeli bathabathe iSödermalm, Gamla Stan kunye ne-ermstermalm evela kwiinduli zayo, kunye nomqolomba kuphela wokuba ngumrhumo wokungena kwabantu abadala abangama-120 (ukwanda ukuya kwi-160 kronor ngo-8pm, kwakhona , ufike khona kwangoko).
Imisebenzi yomlilo ngaphezulu kweStockholm ku-Eva wonyaka omtsha. Ifoto: Hasse Holmberg / TT
Isikwere seCentral Götaplatsen siyintandokazi phakathi kwabahlali ngenxa yeentetho, ukubala emva koko kuqhume izinto zomlilo ezilandelayo - singasathethi ke ngokubamba imivalo exakekileyo eAvenyn- kodwa oko kukwathetha ukuba iqinisekisiwe ukuba igcwele.
Enye into enokwenzeka inokuba liphephandaba i-Göteborgs Posten yomlilo oMtsha woNyaka oMtsha obonisa indawo eseGöta älv. IGötaälvbron ekufutshane yindawo esondeleyo enendawo efanelekileyo yokuyibukela, ngelixa amanye amabala aphezulu esiya esixekweni njengeMasthuggsberget nawo aya kusebenza ukuba bubusuku obucacileyo.
Indawo emnandi yokuthabatheka kukonwaba sisikwere esingaphandle kweMalmö Opera, esiya kuba nomboniso okhanyayo, ukusebenza kweokhestra kwaye, ewe, ukubala okukhulu kulandelwa yimililo.
IMölevångstorget ikwayindawo eqhelekileyo kubantu abancinci ukuba babukele ezomlilo, kodwa inokuba sisiphithiphithi ukuba ke unabantwana kungcono ukhethe indawo ezolileyo. Isithili seVästra hamnen sanamhlanje silingana nokukhululeka ngakumbi kwaye sinembono entle ye-Öresund Bridge kunye neCopenhagen ukuba ufuna ukufumana into entsha yokubukela uNyaka oMtsha uqhubeka kumazwe amabini ngaxeshanye.
Eyona ndawo iphakamileyo exhaphakileyo kwisixeko esincinci yinduli ejikeleze iUppsala Slott nembono yayo kwiziko kunye namadlelo. Uyonwabile ukwenza izinto ngaphakathi (kwaye uhlawule imali ngayo)? Indawo yokutyela iElite Hotel Academia kumgangatho we-11 yindawo entle - ukuba ungafumana itafile.
Umasipala wase-Umea uthathe isigqibo sokufaka i-lasers njenge-2018, ke eli lithuba lokugqibela kwikamva elibukeleyo lokubukela umlilo wabo eSkeppsbron. Izinto ziqale ngo-11.30 ebusuku. Ukhetha imiboniso ye-laser? Zombini iLidköping kunye neBoden bayazitshitshisa iziqhushumbisi kulo nyaka ukukhusela izilwanyana kunye nokusingqongileyo, ke yiya kwezi dolophu ukuba ufuna ukubona ukuba ii-lasers zoNyaka oMtsha zijongeka kanjani.
Isiko lokuthenga kunye nokukhanyisa umlilo ukuze ubhiyozele uEva woNyaka oMtsha eSweden kuthetha ukuba nokuba akukho sibonakaliso saseburhulumenteni kwidolophu yakho, uya kuba nakho ukubona into xa ufumana indawo entle efana nentaba okanye isikwere esiphakathi kanye phambi kwaphakathi kobusuku.
Kukwafanelekile ukujonga iwebhusayithi esemthethweni kamasipala ukuze ubone ukuba akukho nto ilunge ngakumbi eqhubekayo. Gott nytt år!